XASAASI:- Afar Qodob Oo RW Kheyre Ku Qasabtay inuu Deg Deg ugu safro Itoobiya & khatar Amaan Oo… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XASAASI:- Afar Qodob Oo RW Kheyre Ku Qasabtay inuu Deg Deg ugu safro Itoobiya & khatar Amaan Oo…
Ahmed weheliye Gaashaan 26 May 2018
Adis Abab ( Mareeg News ) Raisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa Gaaray magaalada Adis Abab Ee daka itoobiya safar aan la shaacin oo Imaanya Xili Dalka Ka jirto xaalad xasaasi ah.
Wasiirka arimaha dibada iyo agaasimaha Vila Somalia Oo Socdaal qarsoodi ah ku tagay itoobiya tobaadyadii la soo dhaafay ayaa safarkan la rumeeysanahy ineey u Gogol Xaareeyn.
Sababaha ugu waaweeyn Ee keentau Safarka Rw Kheyre ayaa ah.
1- RW Cusub ee itoobiya Abay Ahmed oo booqday doowlada deriska balse aan soo booqan soomalia , Iyo Siyaasada m cusub ee abay ahmedd ee geeska afrika guud ahaan gaar ahaan soomaaliya oo aan cadeeyn.
2- Safarkii Hogaamiyaha Jubaland ahmed madoowe ee itoobiya iyo lakulmidiisa Qalbi dhagax oo oo ay xukuumada RW kheyre u gacan gelisay itoobiya.
3- Xiriirka Itoobiyada cusub kala dhaxeeyo maamul goboleedyada iyo sidoo loo sameeyn lahaa Xiriir cusub ee saaxiibtinimo oo dhex mara xukuumada cusub ee itoobiya iyo Dowlada soomaaliya, iyo sidii loo cusbooneeysiin lahaa galalkii hore ay soomaaliya kula hishiisay RW Heyla maryam desaleem.
4- Dagaalka U dhaxeeya labada maamul Somaliland iyo Puntland iyo in ay itoobiya u yeerto madaxda maamuladaas xaalada ay dhax gasho maadaama dowlada soomaaliya ay Maaro u weysay.
HOGGAAMIYA UCUD FEYSAL ALI WARAABE
Feysal Cali waaraabe Hoggaamiya Xibiga ucud iyo madaxweynaha soomaliland labadu waxeey warbaahinta u sheegeen in soomaaliya ay kuso duushay madaxbanaaida soomaaliland.
madaxweynaha soomaliya waxuu Cadeeyay ineey maaro u heli kari weysay Dowlada soomaaliya Baajinta Dagaalka Tukaraq.
RW kheyre ayaa lakulmay Wasiirka arimaha dibada Itoobya iyo Dimlumaasiyiin badan saacada soo aadan ayuu Mr Kheyre la kulmi doonaa Abiy ahmed.
Kulankan ayaa ah kii ugu horeeyay uu Rw cusub ee itoibiya la yeesho madaxda dowlada Federalka, Siyaasada dowlada cusub ee itoobiya ayaa kala cadeey mabaadi’da ay ku taagantahay waloow ay xukumadii Heyla maryam desalem cadeeysay in xiriirka diblumasi kala dhaxeeyo dowlada dhexe madaxbanaanida soomaaliyana ay dhowreeyso.
Maxeey Shirkada Facebook u dalbaneeysaa Inaad dhigto sawirkaada oo qaawan?